အသုံးပွုသူ:DTS~mywiki - ဝီကီပီးဒီးယား
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၉၀ ၁၃၅၂ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လဆန်း ၆ ရက် (၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် (၁၉၄၈) ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့တွင် လုံးဝလွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။
၂။ (၁၉၈၈) ခုနှစ် အတွင်း အရေးအခင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင် အခြေအနေ အရပ်ရပ် ယိုယွင်း ပျက်ပြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ယိုယွင်း ပျက်ပြားခဲ့သည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး အကျိုးငှာ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်၏ အာဏာ အရပ်ရပ်ကို လုံးဝတာဝန်ယူခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အပါအ၀င် နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းများကို ဖျက်သိမ်းလျက် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းကာ တာဝန်ကြီး (၄)ရပ်ကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အရေးကိစ္စအ၀၀ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၃။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်အတွင်း ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေးတို့ကို ထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်သော ဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ကြေညာချက်၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၄။ ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်စေရန် ပုဂ္ဂလိက၊ သမ၀ါယမနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် နိုင်စေရန်အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော ဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်ပြီး လိုအပ်သောဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်လျက် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် လျက်ရှိသည်။
၅။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင် လမ်းပန်းဆက် ဩယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့ စေရန်နှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များကို လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၆။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ တပ်မတော်သည် မည်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကိုမျှ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသော အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်ကို မာရှယ်လော (Martial law) ဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အစိုးရသည် စစ်အစိုးရအဖြစ် အုပ်ချုပ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ လက်ခံထားသည့် အစိုးရဖြစ်ကြောင်း အားလုံး ပင်အသိဖြစ်သည်။
၇။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် လွတ်လပ်၍ တက်ကြွသော နိုင်ငံခြားရေးဝါဒကို ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ အသီးသီးနှင့် ချစ်ကြည်စွာ ဆက်ဆံလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံအချင်းချင်း သံတမန်ဆက်ဆံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည်သည့်သံရုံးကိုမျှ ယခုအချိန်ထိ ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက် ထားရှိခွင့်ပြုပြီး ပုံမှန် ဆက်ဆံနေသည့်နည်းတူ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည် များတွင် မြန်မာ သံရုံးများကို နုတ်သိမ်းခြင်းမပြုဘဲ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ ပုံမှန်ဆက်ဆံလျက် ရှိသည့် အပြင် ယခင်က သံရုံးမရှိခဲ့သော နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် သံရုံးအသစ်တရုံး တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၈။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသုံရုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝါဒကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူနှင့်အညီ လိုက်နာ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မိမိ၏ လွတ်လပ်မှုကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်လျက် မိမိ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းများကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂပဋ္ဋိဥာဉ်စာတမ်းနှင့် အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
၉။ နိုင်ငံအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားစေမှုကို ရှောင်ရှားရန် သံတမန်အချို့. သံတမန် ကျင့်ဝတ် ဖေါက်ဖျက်မှု များကိုလည်း သဘောထားကြီးစွာဖြင့် သံတမန်အမည်နှင့် နိုင်ငံအမည်များကို ထုတ်ဖေါ်ခြင်း မပြုဘဲ မိမိတို့ ပြည်တွင်းရေးတွင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရန် အကြိမ်ကြိမ် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သံတမန်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးများကိုလည်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း အစိုးရ အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားစေမည့် ကိစ္စရပ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ယနေ့ထိ မည်သည့် ပြဿနာမျှ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ခြင်း မရှိပါ၊ သံတမန်အချို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် မိမိတို့ အစိုးရအပေါ် အထင် အမြင်လွဲမှားမှုကိုလည်း သဘောထားကြီးစွာထား၍ သံတမန်နည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၀။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (တပ်မတော်)သည် နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ကို ယူခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ် အခြာ အာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးတို့ကို စွဲမြဲစွာကိုင်စွဲဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း လက်နက်စွဲကိုင် ဆူပူသောင်းကျန်း သူမျိုးစုံကို တပ်မတော်သားများ၏ အသက်၊ ဩေး၊ ချွေး မြောက်များစွာ ပေးလှူလျက် ထိုးစစ်ကြီးများဖြင့် ချေမှုန်းခဲ့သည်မှာ အားလုံးပင် အသိဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်သဖြင့် ဆူပူသောင်းကျန်းသူများနှင့် နိုင်ငံရေးနည်းအရ စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းကို လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို စွန့်လွှတ်၍ အလင်း ၀င်လာသူများကို ကောင်းမွန်စွာလက်ခံကြိုဆို၍ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးလုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့ အစည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံရေး အစိုးရ မဟုတ်သဖြင့် မည်သည့် လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ နိုင်ငံရေးအရ စေ့စပ် ဆွေးနွေးခြင်းပြုရန် အကြောင်း မရှိပေ။
၁၁။ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(တပ်မတော်)သည် ပါတီစုံဒီမိ်ုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြဌာန်းလျက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်လိုသော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ထ်ို့အပြင် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုလည်း ပြဌာန်းပေးခဲ့သည်။
၁၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ(၃)တွင် “လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒရှင် နယ်များမှ ဥပဒေ နှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်၊” ဟု ပြဌာန်းပါရှိသည်။ ယင်း ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ထိုသို့ လွှတ်တော် ခေါ်ယူရန်အတွက် ပါတီစုံဒီမိ်ုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဆောင်ရွက် ရန်ကိစ္စများအား ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ် အရွေးခံရသည့်ပါတီများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရွေးခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားကြရန် အခါအားလျော်စွာ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၁၃။ ယနေ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးသည့် နောက်တွင် လွှတ်တော် ခေါ်ယူရေး၊ အာဏာ လွှဲပြောင်းရေးကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာစောင်များထုတ်ဝေနေခြင်း၊ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံနေခြင်း၊ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများမှ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်ခြင်း၊ ဩေးထိုးလ၍ံ့ဆော်ခြင်း၊ တရားမ၀င် စာရွက် စာတမ်းများထုတ်ဝေခြင်း ပြုလုပ်နေကြသည်။
၁၄။ လွှတ်တော် ခေါ်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်တွင် ရှင်းလင်းဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် အာဏာ လွှဲပြောင်းရေး ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌက တိုင်းမှူးများ၊ တပ်မမှူးများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌများအား အခါ အားလျော်စွာ ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများတွင် ညွှန်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး(၁)အနေဖြင့်လည်း (၁၉၉၀) ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် (၁၀၀)ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ့ တိတိလင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၁၅။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတရပ်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တရပ်ပေါ်ပေါက်လာရုံဖြင့် ဥပဒေပြုမှု အာဏာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အာဏာနှင့် တရားစီရင်မှုအာဏာ ဟူသော အချုပ်အခြာအာဏာ သုံးရပ်ကို အလို အလျောက် မရရှိဘဲ၊ အခြေခံဥပဒေ တရပ်အပါ် အခြေပြု၍သာရယူနိုင်ကြောင်း အထူး ရှင်းလင်းရန် လိုမည် မဟုတ်ပါ။ (၁၉၄၇)ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေသည် (၁၉၄၇)ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်ကလက်ခံ၍ ဥပဒေအဖြစ် အတည် ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ထို အခြေခံ ဥပဒေ အာဏာတည်ပြီး အမှန်တကယ် အကျိုးသက်ရောက်သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဝ လွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံတော် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့် (၁၉၄၈)ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက်နေ့တွင်မှ ဖြစ်သည်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်သည်။ နိုင်ငံတခု၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတရပ်သည် လွတ်လပ်ရေး မရမီ ရေးသားထားသည့် ဥပဒေနှင့် လွတ်လပ်ရေး ရသည့်နောက်မှ ရေးသားသည့် ဥပဒေဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ကြသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရပြီးမှသာ တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်ခေါ်ယူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲကြသည့် အစဉ်အလာရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲပြီးမှ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ထိုအချိန်က နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဗြိတိသျှတို့ထံမှ ငြိမ်းချမ်းသော နည်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို အမြန်ရယူလိုသောဆန္ဒကြောင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှာ ထင်ရှား သည်။
၁၆။ (၁၉၇၄)ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကိုလေ့လာပါက လွတ်လက်ရေးရပြီးနောက် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့သောဥပဒေဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှငြင်းဆိုခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၇။ (၁၉၄၇) ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေသည် လွတ်လပ်ရေးမရမည်ရေးဆွဲသည့်ဥပဒေ ဖြစ်ပြီး (၁၉၇၄)ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ ရေးဆွဲသည့်အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ကြောင်း ကွာခြားချက်ကို အထူး သတိပြုကြရန်လိုသည်။
၁၈။ ပါတီစုံဒီမိုကရစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ အများစု၏ ဆန္ဒမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ရေးဆွဲရေးဖြစ်ကြောင်း ယင်းတို့၏ သဘောထား ကြေညာချက်များ အရ သိရှိနိုင်သည်။ (၁၉၄၇)ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲစဉ်က တိုင်းရင်းသားများ အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပင်လုံညီလာခံတွင် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း လူမျိုးစုများနှင့်သာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီး မွန်၊ ရခိုင်စသော လူမျိုးများနှင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအရ နိုးကြားလာသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အများ အပြားရှိရာ ၄င်းတို့၏ဆန္ဒသဘောများကို ညှိနှိုင်းရယူပြီး ခိုင်မာသည့် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ တရပ် ရေးဆွဲပြဌာန်းရန် အထူးလိုအပ်နေကြောင်း ထင်ရှားနေသည်။
၁၉။ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် စစ်အစိုးရတရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မာရှယ်လော (Martial law) ဥပဒေကို ကိုင်စွဲကျင့်သုံးနေသည့်အစိုးရဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်သည် နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံအား အောက်ပါအာဏာ သုံးရပ်ဖြင့် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ (က) ဥပဒေပြုမှုအာဏာ၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ကသာ ကျင့်သုံး ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ခ) စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာ၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ကသာ ကျင့်သုံးပိုင် ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအာဏာကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တကွ ပြည်နယ်/တိုင်း။ မြို့နယ်စု။ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စု ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်အား ခွဲဝေလျက်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက် စေခြင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ပေါ်ပေါက် လာမည့်အစိုးရလက်ထက်တွင် ၀န်ထမ်းများသည် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကင်းရှင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက် ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ (ဂ) တရားစီရင်မှုအာဏာ၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ကသာ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာသည့် အချိန်တွင် အလေ့အကျင့်ရစေရန် သာမန်ရာဇ၀တ် မှုနှင့် တရားမမှု စသည်များကို တရား ရုံးအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့ စည်းပြီး စစ်ဆေး စီရင်စေလျက်ရှိသည်။
၂၀။ ထို့ကြောင့် ယနေ့အခြေအနေတွင် ပြည်သူများက ရွေးကောက်တင်မြေ‡ာက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရန် တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
၂၁။ နိုင်ငံတော်အာဏာရယူရေးအတွက် ယာယီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ၍ အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကို မည်သည့် နည်းနှင့်မျှ လက်ခံမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ခိုင်မာသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သစ်အရ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရတရပ် မဖွဲ့စည်းမီ ကြားကာလတွင် နိုင်ငံ တော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေးအဖွဲ့(တပ်မတော်) အနေဖြင့် - (က) ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမ္မပကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးဟူသည့် အရေးသုံးပါး၊ (ခ) နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကြေညာချက် အမှတ် (၁/၈၈) တွင် ပါရှိသော တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေး၊ လမ်းပမ်းဆက်ဩယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့စေရေး။ ပြည်သူများ. စားဝတ်နေရေးချောင်လည်စေရေးနှင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး စသည့် တာဝန်ကြီး(၄)ရပ်အနက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး တာဝန်မှအပ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး သုံးရပ်နှင့် (ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအားလုံး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်း တာဝန်များကို အလေးဂရုပြု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဩားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပွုသူ:DTS~mywiki&oldid=418909" မှ ရယူရနျ
ဤစာမကျြနှာကို ၂၅ ဩဂုတျ ၂၀၁၈၊ ၀၄:၀၃ အခြိနျတှငျ နောကျဆုံး ပွငျဆငျခဲ့သညျ။